OnePlus dia hampiditra famandrihana tsy misy tariby amin'ny taona 2019 | Androidsis
OnePlus dia miasa amin'ny famandrihana tsy misy tariby ho an'ny maodely 2019
Eder Ferreño | | bateria, OnePlus
OnePlus dia nampiditra ity fararano ity ny rafitra vaovaon'i fiampangana haingana, iray amin'ireo matanjaka indrindra hitanay tao amin'ny Android ankehitriny. Antenaina fa hampiasa azy io ireo modely navoakan'ny marika sinoa amin'ny taona 2019. Ankoatr'izay dia naseho fa ilay orinasa miasa ihany koa amin'ny rafitra famandrihana tsy misy tariby, izay hampidirin'izy ireo ao amin'ny telefaonin'izy ireo izay tafakatra amin'ny tsena amin'ity taona ity.
Hitanay izao fa mihaona eo amin'ny marika amin'ny Android ny famahanana tsy misy tariby. Modely maro sahady no efa manana fanohanana azy io, indrindra amin'ny sehatra ambony. Ka, tsy mahagaga raha marika toa ny OnePlus hampiditra azy ireo amin'ny findainy koa izy ireo.
Sady OPPO no OnePlus niditra ho mpikambana ao amin'ny Wireless Power Consortium (WPC). Fikambanan'ny orinasa mitady hampivelatra sy hampiroborobo ny rafitra famindrana tsy misy tariby Qi. Noho izany, ny zava-misy fa ny marika roa dia nampifandraisina, samy ao anatin'ny vondrona orinasa iray ihany, dia famantarana mazava.
Noho izany, azontsika atao ny manantena fa ireo maodely alefan'ny OnePlus any amin'ny magazay amin'ny taona 2019 dia hanana fanohanana amin'ny famahana finday. Amin'ny fitsipika dia afaka manao izany isika manantena telefaona roa avy amin'ny marika sinoa. Saingy voalaza ihany koa fa handefa marika vaovao izy ireo, miaraka amin'ny anarana hafa. Tsy fantatray raha mety hanohana ity marika ity.
Ny OnePlus 6T dia efa tonga niaraka tamin'ny vera niverina, izay fepetra takiana ilaina hahafahana mampiasa wireless charge. Ka antenaina fa ny maodely amin'ity taona ity dia hanana endrika vita amin'ity fitaovana ity indray. Na dia matetika aza ny fampiasana vera amin'ny avo lenta amin'ny Android ankehitriny.
Tsy misy isalasalana, mampanantena izy fa ho taona manandanja ho an'ny marika sinoa. OnePlus no andrasana mampiseho modely misy 5G ihany koa. Izy io koa dia mety ho iray amin'ireo telefaonan'ny orinasa ho tonga miaraka amin'iny vidiny tsy misy tariby iny. Ny fitaovana voalohany avy amin'ny orinasa amin'ny 2019 dia tokony ho tonga amin'ny lohataona. Azo antoka fa hahalala bebe kokoa isika mandritra ireo volana ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » OnePlus » OnePlus dia miasa amin'ny famandrihana tsy misy tariby ho an'ny maodely 2019
Samsung dia mbola very tany any Chine sy India
Ahoana ny fametrahana ny ColorOS 6 beta amin'ny Oppo R15: tonga ny fanavaozana